Steve Jobs dia niantso an'i stylus ho tsy fahombiazana lehibe tamin'ny 2004 | Vaovao IPhone
Tamin'ny taona 2010, ny tale jeneralin'ny Apple tara indrindra sy malaza indrindra, Steve Jobs dia nanambara fa tsy maninona mahafinaritra amin'ny stilosyTsy vitan'ny hoe nisalasala izy hampiditra ireo karazana fitaovana na kojakoja ireo amin'ny vokariny, fa nofaritany kosa ireo penina kely namboarina tamin'ny vanim-potoana maoderina ireo fa tsy fahombiazana lehibe. Nandritra ny fehezanteny omaly dia nanolotra ny azy i Apple, mifanohitra amin'ilay mpampianatra am-polony taona maro an'ny mpampianatra Cupertino. Inona avy ireo antony nahatonga an'i Apple hampiditra stylus? Tsy isalasalana fa hisy adihevitra be dia be, tsy ny momba ny mahasoa azy ihany fa ny fandavana ny zavatra nataonao omaly. Aza miteny mihitsy hoe, hoy ny sasany.
Ny teny marina nolazain'i Steve Jobs dia: "Raha mahita stylus ianao dia atsipazo io", izany indrindra no fampiasana nomen'i Steve tsara ny stylus tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny horonantsary aseho eto ambany dia azonao atao ny mahita io fotoana angano io amin'ny minitra 6:45 nandritra ny fehezanteny fanolorana ny Original iPhone tamin'ny 2004.
Avy eo isika dia afaka nieritreritra ny antony mahatonga an'i Apple hanana fahalalahana mihemotra toy izao. Tianay kokoa ve ny mihaino an'i Steve Jobs ary manipy ny Stylus Apple amin'ny rivotra sa mino izay lazain'i Tim Cook antsika isika?, Ny zavatra tsy maintsy haintsika mazava amin'ny fotokevitra dia tsy io fantatsika io no fantatsika tamin'ny 2004, hoy i Phil Schiller ity stylus ity dia iray amin'ireo vokatra mandroso indrindra amin'ny teknolojia noforonin'i Apple, ny Apple stylus dia misy sensor roa natao ho miara-miasa amin'ny 3D Touch hahitanao ny karazana kapoka ataontsika, ary koa ny firona amin'izany hanome sary mifanaraka amin'izany. Ny efijery kosa dia hanisy fiheverana ny fomba ametrahantsika ny rantsan-tananantsika haka sary an-tsaina ny fihetsik'izy ireo amin'ny fomba fijery roa samy hafa, ary ho an'ity rehetra ity dia tsy maintsy ampiakarina amin'ny tariby misy tselatra izy io.
Tsy isalasalana fa mahaliana ilay stylus vaovao, angamba tsy dia lafo loatra, satria ity fitaovana ity dia mitentina 99 $ fanampiny amin'ny vidin'ny fahazoana ny iPad Pro. Tsy isalasalana fa ny hifaninana amin'ny orinasan'ny famolavolana sy ny injeniera matihanina no tanjony, izay miharihary fa sarotra be raha mbola mitazona ny iOS amin'ity maodely iPad vaovao ity.
Tena nanjary mazava tsara fa ity stylus ity dia tsy ilay faritry ny fingotra sy alimika izay an'i Steve Jobs, na izany aza, amin'ny ankapobeny dia mitovy izy ireo, matetika ary indrindra rehefa misolo tena ny ekipa toa an'i Apple ianao dia mila refesina mandra-pahatonga azy tsara ny mampiseho radicalisation amin'ny lafiny sasany, na izany aza, Amin'ity fepetra ity dia mampiseho ny fahefany mitarika i Tim Cook ao amin'ny orinasa Cupertino, nefa tsy nanozongozona ny tanany handà izay rain'ny orinasa izay iasany ankehitriny raha hitany fa ilaina izany. Na izany aza, mazava fa raha tsy nilaza i Steve Jobs fa ny fanamavoana dia mety ho hitantsika fa fandrosoana lojika ny fandefasana ilay stazy vaovao fa tsy fanitsiana fotoana fohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Steve Jobs dia niantso ny stilosy ho tsy fahombiazana lehibe tamin'ny 2004
Mazava fa rehefa nilaza i Steve Jobs fa nanana iPhone teny an-tanany fotsiny izy dia ilay iPhone voalohany!
Ary mazava ho azy fa ny pensilihazo amin'ny telefaona dia tsy misy dikany, taona maro taty aoriana ary ny iPad "pro" dia mitondra ny pensilihazo mba hanomezana fahafaham-po ny filàna sasany, satria tsy dia misy dikany ny olona mampiasa ny pensilihazo isan'andro, afa-tsy ireo matihanina izay asa azon'izy ireo ampiasaina izany ary koa ireo mpankafy zavakanto sasany.
Ary ankehitriny te-hanao tendrombohitra amin'ity rehetra ity ianao.
acdf4Adrian dia hoy izy:
tamin'ny 2007 izany
Valiny amin'ny acdf4Adrian
Ireo basy dia tsy mandeha lavitra any. Ny niarovan'i Steve Jobs dia ny famoronana fitaovana mikasika izay nanery ny fampiasana ny styus NAVIGATE tamin'ny alàlan'ny menus-ny dia hadisoana. Toy ny amin'ny Nintendo DS, raha te hampiasa azy tsara ianao dia tsy maintsy mampiasa ilay stylus. Na miaraka amin'ny Pilot Palm. Toy izany no nampiasaina tsara ny touchscreens talohan'ny iPhone. Satria izy ireo dia efijery namaly ny faneriterena fa tsy ny fifandraisana tsotra amin'ny rantsan-tànana noho izy io fitaovana fampitaovana amin'ny herinaratra (izany no mahatonga ny efijery tsy mandeha raha manao fonon-tànana tsy voaomana ianao).
Ankehitriny. Tsy mitovy ny tokony hampiasanao ny volo mba hahafahana mifanentana aminy. Tena ilaina amin'ny fampiasana sary, famolavolana, fanitsiana sary ary fampiharana hafa ny fampiasana ny stazy satria io no fomba tokana ahazoana ny mari-pahaizana ilaina. Tsy azo atao izany amin'ny alàlan'ny stales mifanentana izay navoaka hatrizay satria na firy na firy no tadiavinao, ireo toro-hevitra boribory sy matavy ireo dia tsy mahatratra io haavon'ny famaritana io.
Samy marina àry i Steve sy i Tim, satria tsy mitovy ny zavatra resahin'izy ireo. Apple dia tsy nilaza fa izao dia hifandray amin'ny iPad miaraka amin'ny stylus, izy io ihany no azo ampiasaina amin'ny rindranasa sasany.
Nolazainy fa satria ny iPhone voalohany dia tsy natao hampiasaina amin'ny stilosy, ary mifantoka amin'ny fampiasana hafa. Nihalehibe ireo efijery satria mahazo aina kokoa ihany koa ny fanoratana azy (tsy tsindrio miaraka aminao ny bokotra 2 na 3). Tsy mandany na inona na inona izy ireo, na dia hampiasa izany aza ny mpitsikera. Fa marina ihany koa fa raha milaza izany ary indrindra indrindra amin'ny ipad voalohany, ny orinasa Wacom dia nanao stales mifanentana, nanatsara azy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Ho an'ireo izay manome hevitra fa ny stylus dia eo amin'ny finday dia tsy fahita firy, satria diso be loatra ny fampiasana azy noho ny famolavolana na ny matihanina. Ohatra, alohan'ny handefasana sary na horonan-tsary (mailaka, WhatsApp, Skype) dia mora kokoa ny manitsy sy mandefa azy. Efa miaraka amin'ny iPhone 4,7 dia mahazo aina tsara ny mandray naoty toy ny kahie kely (ary miaraka amin'ny fampiharana mifanentana aminy), manasonia antontan-taratasy (noho izany dia tsy ilaina ny manonta ary somary vao mainka isika ekolojika), ary fampiasana maro hafa fa tena tsara ny afaka manana azy ireo sahady fa mandany denaria iray ny fitaovana. Ary koa, tena zava-dehibe, eo aminao foana ny iPhone ary tsy eo ny iPad, ary bebe kokoa raha 12,9 ″. Manantena aho fa ny Apple Pencil dia mifanaraka amin'ny iPad Air mandroso (raha tsy izany dia tsy maintsy manova ny iPad aho). Amin'izany no hanoloanao ny penina mandritra ny androm-piainana amin'ny zavatra maro. Tsy eo am-paosiny ny Pencil hitondrana azy ao am-paosinao, toy ny penina ihany. Talohan'ny iPad dia nanana naoty 10.1 aho ary tsapanao fa mety hahasoa azy nefa koa, na eo aza ny fampielezana hevitra momba ny zavatra azonao atao amin'ny staody, dia misy zavatra tsy hita foana na misy lesoka kely ao aminy, tsy manampy koa ny OS Android. Ary tsy nanana naoty aho raha heverina ho lehibe loatra, toy ny iPhone 6 plus.
Izany dia voalaza tamin'ny fampisehoana Keynote an'ny iPhone voalohany ary tamin'ny 2007 izy io, fa tsy tamin'ny 2004
Izany no voalaza tamin'ny fampisehoana Keynote an'ny iPhone voalohany, saingy tamin'ny 2007 izy io fa tsy tamin'ny 2004
CLHdesigner dia hoy izy:
Tsy isalasalana fa nandeha nanamboatra fomba vaovao hifandraisana amin'ny fitaovana finday iray izy, ary manaisotra ny fomban-drazan'ireo fotoana ireo. Ity dia sombin-javatra hiara-miasa ary tsy mamorona stylus tsotra !!
Valiny amin'i CLHdesigner
Anti Jobs dia hoy izy:
"Tsy misy mila stylus" ary ny "4 santimetatra no refy mety indrindra amin'ny efijery" dia fehezanteny izay mampiseho fa tsy nahita fahitana toy ny fiheveran'ny hipsters sy noobs azy i Jobs.
Fironana ankehitriny ny phablets, ny écran be endrika ary ny stylus… Ary ho fanampin'izany rehetra izany, ny fironana natombok'ilay mpifaninana mangidy indrindra tamin'i Apple: Samsung.
Valiny amin'ny Anti Jobs
Tsy manaiky aho, Anti Jobs. Ary tsy manana fiaraha-miory manokana amin'ny CEO taloha an'ny Apple aho, saingy tsy maintsy manavaka ny daty ianao: Nilaza i Steve Jobs fa tsy te hanana Stylus izy tamin'ny 2007 tamin'ny efijery 3,5-inch. Ao amin'ny 2015 isika ary nanolotra Stylus tamin'ny efijery 12,9-inch izy ireo. Etsy ankilany, ny stilus dia nampiasain'ny Nokia 5800 talohan'ny nieritreretan'ny Samsung momba izany. Ary efa taloha kokoa be izy io, satria nanana poketra pc (manodidina ny taona 2000) ny rahalahiko izay efa nampiasainy. Samsung dia tsy namorona karazana fitaovana fanampiny.
Izay ekeko dia ny Samsung no nanomboka ny fironana finday lehibe. Ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara.
@Pablo: Tokony ho fantatrao rehefa misy mikapoka anao, ka zahao sy vonoy miaraka amin'ny an'ny Nokia 5800, fifamaliana iray izay tsy mahakivy anao.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPhone 6s sy iPhone 6
Mahery vaika kokoa noho ny iPhone 6 ny iPhone 6s?